KUMKANI KALEON: INGCWELE YEROLLER NOVOCAINE YOKUHLOLWA KWEALBHAMU - IINDABA
Eyona nto intle malunga neentatheli zamatye aseBritane yindlela abayifumana ngayo inyani, ngamanye amaxesha benokuqwalaselwa okuncinci.
Eyona nto intle malunga neentatheli zamatye aseBritane yindlela abayifumana ngayo inyani, ngamanye amaxesha ngaphandle kokujonga ixesha elide, isizathu, okanye kwiveki ezayo. Ke, ngokungathandabuzekiyo, abantu bakhalaza malunga nokutyala imali yabo kwiidola abazisebenzele nzima kwi-mediocre, i-wackily-hyped shit ethi, ngelishwa, ayiphili ngokuhambelana ne-poster-egcwele umthwalo weposta yokuhombisa iindonga zekhonkrithi zokugcina iirekhodi zasekhaya. Kodwa kusekho into ethandekayo malunga nokuzonwabisa okugqithisileyo ngamanye amaxesha, i-giddiness engabonakaliyo ekhumbuza i-glee ephefumlelweyo, engafakwanga. I-NME isenokuphambana ngokupheleleyo, kodwa ipakishwe luhlobo lokungaboni, nolungakhange luqwalaselwe ukuba uninzi lwamanye amaphephancwadi luye lwafunda ukuzikhusela ngekratshi (i-yawn).
I-England ibonwabile kakhulu ngooKumkani bakaLeon ehlotyeni, kwaye iiKumkani zikaLeon, ziyavela, ziyavuya nje: imikhosi yababhali bamatye abakhuphayo bayakhubeka emva kokukhanya kwe-Glastonbury (iiKumkani ziqhayisa, kuyabonakala ukuba, linqanaba lesibini lasendle iseti), sizilungiselela ukubhengeza ubukhosi basebukhosini (cringe). I-Stateside, ibhulukhwe ebalulekileyo isacociwe, kodwa ibhendi sele ifumene isixa esifanelekileyo sokumbombozela kwiintatheli ezimbalwa, kwaye kucwangcisiwe ukuba ikhuphe ubude obugcweleyo kwi-RCA ngasekupheleni kukaJulayi (ekunokwenzeka ukuba ifumane Amakhosi 'aseMelika awazisa ngomatshini kwaye ayasebenza). Okwangoku, kukho Ingcwele Roller Novocaine , ingoma ezintlanu EP; ngokucacileyo, irekhodi elinemizuzu elishumi elinesihlanu ubungqina obaneleyo be-mammoth hyping. Lo mnikelo mncinci wenyani, i-blues-based, i-anthemic Tennessee rock ikhathalela abafana abahlanu abanegama elifanayo lokugqibela (abathathu abazalwana- oonyana bomshumayeli wePentekoste- kunye nomzala omnye), iinwele ezininzi, amadevu ambalwa, kunye iijee ezixineneyo. Zilungiselele ukufunda ibinzana elithi 'kumazantsi-othosiweyo' amaxesha aliqela ngaphezulu kwehlobo: i-rawk ibuyile (kwakhona).
Kuzo zonke iindlela zabo zokuphosa, iiKumkani zikaLeon zikhethekileyo ngenkulungwane yamashumi amabini ananye. Umculo wangoku, ubukhulu becala, ujolise ekuphawuleni uluhlu olunomtsalane, olunomdla kakhulu, kunye nokucofa izandi ezindala kwiitemplate zenoveli ezingacacanga; Umdlalo omtsha yindlela onokuthi ususe ngayo ubusela- ukuba namandla kangakanani ukwenza irekhodi liphinde libuyekeze kwimeko leyo. Mqengqeleki oyiNgcwele Iingoma ezintlanu zixube emva kwe60s igaraji / psychedelia kunye ne-70s rock rock, kwaye ngelixa isandi esivelisayo sitsha ngokwaneleyo, iibhulukhwe zangaphantsi zisabonakala. Akunzima ukubona imibala yeeKumkani ezidlulileyo apha: I-Steppenwolf, i-Kinks, i-Neil Young, i-Band, kunye ne-skimpy ye-Velvet Underground.
Xa iiKumkani zijolise ngabom ('Amagumbi kaMolly' abamba indawo ebekwe ngobuchule, bhomboloza-'kube-bekhwaza -'Freebird! 'Isiginci solo), zivakala ngokungathi ziiCrowes eziMnyama ezihlanjululweyo kuneqela le-agile up-and-comers , kodwa xa besondela kumhlaba omtsha: i-vocalist Caleb Followill ine-rich yimble rock yell, kunye nomkhokeli wegitare okhokelayo uMateyu ukhupha uhlobo lokubhomboloza kwezitishi zeradiyo zakudala ezingazukuthambisa ngokungenazintloni. Isikakhulu, nangona kunjalo, nangona Amakhosi eqinisekile kuba acacile ukuba adlala umculo.
'Ukulinda eCalifornia' kunjalo Mqengqeleki oyiNgcwele Iziko elinamanzi, elona liphume phambili kwiingoma ezintlanu ze-EP kunye nesiqwenga esimnandi (ukuba ngokulinganayo sinebland) sehlobo lasePetty-pop. Isigingci sayo esihle, isigalo esicocekileyo, kunye nengoma, ukukhawulezisa-phantsi-kwendlela enkulu iba, emva kokuphulaphula okumbalwa, i-gooey, isikhumbuzi esimileyo sendlela yefomula ye-pop enokuhamba kancinci ezandleni ezingalunganga. Ingoma iyabuna ngokonyuka kwengqwalaselo yakho, ngaphandle kwemizamo yeqela ebalaseleyo yokuyifaka ngamandla. Ngethamsanqa, 'iRoller Engcwele iNovocaine' yeyona ndlela igudileyo, ikhutshiwe, yangcwatywa kwindawo enomsindo, enesandi esibi; i-bassline bassline engqindilili, iphuma ngaphakathi nangaphandle kwengozi yegitare kunye namazwi ahlabayo ('Darling, ujongeka umhle / ndiza kukubeka phantsi,' okanye 'Awunanto ininzi andinako ukuyithatha') . Apha, Amakhosi aphumelele ngempumelelo i-cocky yokuma ngaphezulu kokuqhushumba kwamatye. 'Ixesha elichithwe' yinto ekhawulezayo, enobundlongondlongo eneegitala zokudanisa kunye nezandi zokumemeza; 'Usihlalo we-Wicker' yi-swansong ye-acoustic ethe ngqo, enamacangci acocekileyo kunye ne-strumming. Njenge-buzz yekota-yeyure, konke kulungile.
indala kangakanani i-daft punk
Kulula ukufumana ubuqhetseba malunga novuko olufezekisiweyo lobugcisa bexesha elidlulileyo, kude kube kukuqondwa kokuvela, ukubetha, kunye nokufumana yonke into imanzi. Amakhosi kaLeon awaphantse abe yingozi okanye abe nezinto ezintsha njengempembelelo zawo, kodwa ayathandeka ngokwaneleyo; okona kubaluleke kakhulu, nangona kunjalo, iiKumkani zenza izinto zazo ngohlobo olufanayo lwenxeba, ukushiya okungalawulekiyo okuphawula umatshini wabo wokushicilela wase-UK. Kwaye intshisakalo enkulu, engaboniyo inohlobo lwayo lwesibheno: ubungekhe uthabathe kwaye ubonakalise ukungakhathali kwaye ugcine?
ukuchukumisa ukubangela isihogo 2
i-albhamu efileyo enombulelo
kutheni umculo welizwe ungalunganga
isithethi seBluetooth ekhaya